Nhau - Elliptical Machines Musika 2019 | Kuongorora Mhedzisiro Inoteedzerwa Nezvirambidzo, Mikana Uye Zvakagadziriswa Zvirongwa | UpMarketResearch
UpMarketResearch, imwe yemakambani epasirese ekutsvagisa musika yakaburitsa gwaro nyowani pamusika weElliptical Machines. Chirevo ichi chakazara nemaonero akakosha pamusika izvo zvinobatsira vatengi mukuita sarudzo dzakakodzera dzebhizinesi. Tsvagurudzo iyi inobatsira vese varipo uye vatsva vanoshuvira veGlobal Elliptical Machines Market kuti vaone uye vadzidze zvinodiwa pamusika, saizi yemusika, uye makwikwi. Chirevo ichi chinotaura pamusoro pekupa uye kuda mamiriro ezvinhu, kukwikwidza pamusika, zvipingaidzo zvekukura kwemusika, mikana yemusika, uye kutyisidzirwa kwakatarisana nevatambi vakakosha.
Chirevo ichi chakabatanidzwa pamwe nekukonzeresa kwedambudziko riri kuenderera pasi rose kureva COVID-19 pamusika weElliptical Machines uye kuti denda iri riri kudzoreredza mamiriro azvino. Chirevo chakaburitswa chakagadzirwa nerubatsiro rweyakasimba uye yakakwana nzira yekutsvaga. UpMarketResearch inozivikanwa zvakare nekuda kwayo kwakaringana kwedata uye granular misika mishumo. Mufananidzo uzere wemakwikwi mamiriro emusika weElliptical Machines unoratidzwa nemushumo uyu. Chirevo chine huwandu hwakawanda hwe data pamusoro pechangobva kugadzirwa uye tekinoroji kuvandudzwa mumisika. Iine huwandu hwakawanda hwekuongorora maererano nemhedzisiro yekufambira mberi uku mukukura kwemusika mune ramangwana, huwandu hwakawanda hwekuongororwa kweizvi zvinowedzerwa pakukura kwemusika mune ramangwana.
Chirevo ichi chakaumbwa nekutevera mashandiro emusika kubvira 2015 uye ndeimwe yemishumo yakanyatsotsanangurwa. Iyo zvakare ine data rakasiyana zvichienderana nedunhu nenyika. Maonero ari mumushumo akareruka, anonzwisisika, uye anosanganisira zvinomiririra zvemifananidzo. Aya maonero anoshandawo mune chaiwo-nguva zviitiko. Zvikamu zvakaita sevatyairi vemusika, zvinodzora, zvinetswa, uye mikana yeElliptical Machines zvinotsanangurwa zvakadzama. Sezvo timu yekutsvaga iri kuteedzera iyo data yemusika kubva ku2015, saka chero chinodikanwa chedhata chinogona kuzadzikiswa zviri nyore.